Booliiska Ingiriiska oo London ku xiray Dad cunsuriyeeyay saddex ciyaaryahan. —
Home » Booliiska Ingiriiska oo London ku xiray Dad cunsuriyeeyay saddex ciyaaryahan.
Booliiska Ingiriiska oo London ku xiray Dad cunsuriyeeyay saddex ciyaaryahan.
Booliiska Ingiriiska ayaa Magaalada London ku xiray 4-ruux oo ay ku eedeeyeen in ay midab-tagoor ku sameeyeen Saddexda Ciyaaryahan ee England ka khasaariyay Gool-kulaadka Ciyaartii kama dambeysta Euro 2020 ee Talyaaniga ku guuleystay 11-kii July 2021.
Warbixin uu soo saaray Booliiska ayuu ku sheegay in xabsiga lagu hayo afarta ruux eek u eedeysan cunsuriyeynta Ciyaartoyda kala ah Marcus Rashford, Bukayo Saka & Jadon Sancho oo ku guuldareystay in shaqada ku hubsadaan gool-kulaad loo dhiibay
Ra’iisul Wasaaraha UK Boris Johnson ayaa ka digay in la midab-sooco Ciyaartoyda xulka iyo kuwa ka dheela horyaalka Dalkaas, maadaama sumcad darro ay u tahay Boqortooyada Ingiriiska, sidaas awgeed waxa uu soo jeediyay in meel looga soo wada jeysto arrintaan.
Marcus Rashford, Bukayo Saka & Jadon Sancho oo si gaar gaar ah uga hadlay midab-takoorka lagu sameeyay ayaa ay wax laga xumaado ku tilmaamay tallaabada ay qaadeen jamaahiirta Xulka Saddexda Libaax ee England.
Dowladda Ingiriiska ayaa beegsaneysa koontooyin gaar ah oo lasoo dhigay Aflagaado ka dhan ah Saddexda Ciyaaryahan ee sababta u ahaa in Ingiriiska oo ku dheelayo Dhulkiisa uu ku guuldareysto hanashada Euro 2020.